Nzira Yokutsvaga Miti?
Iwe unogona kutsvaga zvigadzirwa nekupinda muzita rekugadzira kana chinyorwa mubhura yekutsvaga pamusoro peji. Edza kupinda tsanangudzo yakazara. Izvo zvinonyanya kukosha waunoshandisa, zvishoma zvigadzirwa zvaunowana mumapeji ekutsvaga. Iwe unogona kusarudza chikwata chekutsvaga.
Ko Kutumira Kwemari Kunotaridzwa Sei?
Isu WoopSop kugovera International Free Shipping kune vatengi vedu pane zvese zvinogadzirwa, woop woop!
Chii mutengi Protection?
Mutengi Kudzivirira ibati rekusimbisa rinoita kuti vatengi vatengese nekutendeseka pane webhusaiti yedu.
Muri kuchengetedzwa apo:
Chimwe chinhu chawakaraira hachina kuuya munguva yakapikirwa.
The chinhu makagamuchira haana sokurondedzerwa.
The chinhu iwe wakagamuchira kuti akavimbiswa kuti zvechokwadi akanga nyepera.